Ergeyga Gaarka Ah Ee Xoghayaha Guud Ee Qaramada Midoobay Nicholas Kay Oo Ka Hadlay Eedeynta Kufsiga Ah Ee Ka Dhacday Xerada AMISOM | Salaan Media
Sunday, August 18th, 2013 | Posted by admin
Aug 18.2013 Muqdisho(SM) Muqdisho, 18 Agoosto 2013 – Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Nicholas Kay, ayaa walaac kulul ka muujiyay eedeymaha ku aaddan kufsi ka dhacay xero militeri ee ay leeyihiin ciidamada AMISOM. Wuxuu soo dhoweynayaa go’aaanka ay qaateen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo AMISOM ee ay ku sameyeeyeen guddi baara eedeymaha.
“Waxaa muhim ah in baaritaanku uu noqdo mid qotodheer oo degdeg ah. Waxaan ku faraxsanahay siyaasadda Madaxweynaha Soomaaliya ee ah in aan marna loo adkeysanin kufsiga”, ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah Nicholas Kay.
“Haddii uu jiro kiis ama dacwad dhab ah ee u baahan in laga jawaabi, waa in dembiilaha ama eedeysanaha waa in maxkamad la soo taagaa oo lala xisaabtamaa iyadoo xuquuqda asaasiga ahna la ilaalinayo”, ayuu ku raaciyay Ergeyga Gaarka ah Nicholas Kay.
Kufsiga ama dhibaatada loo geysto haweenka ee ka dhaca Soomaaliya waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu halista badan waana caqabadaha degdegga ah ee haysta xuquuqda aadanaha ee hortaagan Dowladda iyo dadka Soomaaliyeed.
Hawlgalka UNSOM wuxuu wadaa hawlihii loo igmaday inuu horumariyo dhowridda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo ku dhaqanka sharciga, gaar ahaan markay timaaddo dhibaatada loo geysto haweenka ama kufsiga. Sidoo kale, UNSOM wuxuu horumarinayaa in si fudud lagu gaaro caddaaladda, kormeeridda iyo warbixin ka gudbinta xadgudubyada loo geysto xuquuqda aadanaha ka dhaca Soomaaliya.
Dadaalladan waxaa ka mid ah taageero tababar oo loo fidiyo ciidamada AMISOM intaan dalka la keenin, taasoo ka mid ah tababar la xiriira xuquuqda aadanaha, Sharciga Caalamiga ee Dagaallada iyo Baniaadanimada iyo Sharciga Qaxootiga